ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကျော်ဖြည့်စွတ်အချိုရည် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
🌟🌟 FLOW 🌟🌟
၂. လေ့လာသင်ယူမှုအတွက် ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း။
၃. မှတ်ဥာဏ်ကောင်းစေပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောက်ို ကောင်းမွန်စေရန် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
Choline သည် Acetylcholine ၏ အဓိက အခြေခံအလွှာတွင် ပါဝင်ပြီး လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် မှတ်ဥာဏ်အတွက်
Bitartrare သည် ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်လမ်းကြောင်းထိ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးပြီးလေ့လာသင်ယူမှု မှတ်ဥာဏ်ပိုင်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်။Choline Bitartrate သည် ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးပြီး အယ်ဇိုင်းမားရောဂါမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
Prostacyclin တည်ဆောက်မှုကို အားပေးပြီး Nitric Oxide သည် ကြွက်သား လုပ်ဆောင်ချက်ကို သက်သာစေပြီးဦးနှောက်သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေသည့်အပြင် သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ကို တိုးစေပြီး ဦးနှောက်အာဟာရကို
ဂိုဂျီဘယ်ရီသည် ဦးနှောက်ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် သင်ယူမှုအားကောင်းစေပြီး မှတ်ဥာဏ်ကောင်းမှုကို ကူညီးပေးသည့် Acetylcholine ၏ အခြေခံအလွှာ ဖြစ်သော Choline ကို တည်ဆောက်ပေးသည်။
ဦးနှောက်ဆဲလ်နှင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် Anthocyanin ပါဝင်ပြီး မှတ် ဥာဏ်နှင့် လေ့လာသင်ယူမှုအားကို ပိုမိုဖွံဖြိုး ကောင်းမွန်စေသည်။
Acetylcholine သည် ဦးနှောက်ဆဲလ်အတွက် အရေးကြီးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောကိုကူညီပေးသည်။ အိုမင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် Dementia ဆိုသောဦးနှောက် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် မှတ်ဥာဏ်နှင့် သမာဓိအားကောင်းစေပြီး ဦးနှောက်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဦးနှောက်ဆဲလ်ပျက်စီးစေမှုကို
ဦးနှောက်အမြှေးပါး တည်ဆောက်ရာတွင်ပါဝင်သော Phospholipid သည် ဦးနှောက်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဦးနှောက် အာရုံကြောကို ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးသည့် Choline နှင့် Acetylcholine ကို တည်ဆောက်ပေးသည်။ မှတ်ဥာဏ်နှင့် လေ့လာသင်ယူမှုကို
အမြင့်မားဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော Bioflavonoid တွင် Oligomeric Proanthocyanidins သို့မဟုတ် OPCS ပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ဆဲလ် ပျက်စီးမှုကို အမြင့်မားဆုံး
ဘိုင်အိုဖလာဗိုနွိုက် သည် အသေးငယ်ဆုံး မော်လီကျူး ဖြစ်သောကြောင့် ရေတွင် ကောင်းမွန်စွာ ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို လျှင်မြန်စွာ ပျံနှံ့စေပြီး ဦးနှောက်ဆဲလ် ပျက်စီးမှုကို တိုက်ရိုက် ကာကွယ်ပေးသည်။
ထို့အပြင် ဦးနှောက်သွေးကြော လည်ပတ်မှုအား ကောင်းစေပြီးဦးနှောက်သွေးကြောကို ခိုင်ခံ့စေသည်။
ဈေးနှုန်း - 55000 ks
အလုံး ၃၀ ပါ တစ်လစာ